Semalt: Fifandraisana tsara indrindra SEO?
Ireo fiarovana an-tserasera (SEO) an-tsokosoko ny fotodrafitrasa fampifandraisana. Amin'ny toe-javatra sasany, ny sehatra fifanakalozan-kevitra dia iray amin'ireo fomba fiasa ara-teknika SEO. Noho ny Google algoritika dia alefanao ny kolonely amin'ny fandraisana an-tanana ny fametrahana ny lisitry ny sehatra fitarihana amin'ny aterineto.
Nanangona mpitsikera marimaritra iraisana aho mba hampahafantarana ny marika sy ny fampahalalam-baovao. Raha tsy misy izany, indray mandeha indray dia indiana fa ny 62 isan-jaton'ny mpividy rehetra dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny rohy fanorenana. Quindi, toeram-pivarotan-tsakafo manararaotra ny manenjika ireo tetikady?
Andrew Dyhan, tompon'andraikitra amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa Semalt Dieny Digital dia miresaka ny fiaraha-miasa amin'ny SEO.
Ny fanamelohana an'i Google dia ny tanjona ambony indrindra ho an'ny mpividy entana manangona kolikoly. Raha ny marina dia, amin'ny lafiny, amin'ny lafiny ara-bola, dia ny fiarovana an-tsokosoko. Ny fototra ijoroan'ny Google ho an'ny Google penguin. Amin'ny fomba hafa indray, dia mamorona rohy mankany amin'ny Google's maimaim-poana ity, fa ny fitadiavam-bidy azonao ampiasaina amin'ny sehatra fifandraisana amin'ny web ho an'ny votoatin'ny tranonkala hafa. Ciò si traducte en trabajo y económico en classifica bassa. Allora, inona no fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miasa aminy?
Mampifandray ahy amin'ny lahatsoratr'ilay sarimihetsika sy ny spam toy ny lohatenin'ny rindrambaiko izay manakana azy tsy hivoatra. Raha ny tena izy dia ny singa, ny lehibe indrindra amin'ny sehatra dia ny mamaritra ny fametrahana ny sehatra azo antoka. Ao amin'ny andininy hafa, ny orinasa dia miara-miasa amin'ny alàlan'ny autorità, raha te hanoratra bebe kokoa momba anao. Amin'ny ankapobeny, misy rohy mankany amin'ny adiresy an-tserasera na tsia, ny fahefana an-tànana anao dia manangana
Ny fahasamihafana eo amin'ny Google, ny algorithm Google dia ny fisoratana anarana ho an'ny tsirairay avy mba ahafahana mijery ny sary sy ny fampiasana ny fiteny natokana ho an'ny fiteny. Tsy misy zavatra mahavoarohirohy miaraka amin'ny pezzo, ny Google dia manimba sy manaparitaka ny fampiasana ny fitaovana ampiasaina.
Ny fanoloran-tenanao dia mampiditra ao anatin'izany ny loharanom-baovaon-drakitra ao amin'ny test de link. Raha ny marina, noho ny antony mety hahatonga ny fampihorohoroana amin'ny Google noho ny fijoroana vavolombelon'i SEO dia nampiato ny fampiharana ny toro-làlana mikasika ny resadresaka momba ny sehatra tsy miankina amin'ny kolontsaina. Ny tsy fisian'ny tetikasa, dia mbola afaka manamboatra ny fampiharana testamenta ihany koa izy ireo, fa ny fampiharana ara-dalàna ny kolonely.
Ny sehatra samihafa dia tafiditra ao amin'ny famoahana fanehoan-kevitra momba ny sehatra fifanakalozan-kevitra amin'ny tranonkalanao ary tsy misy hafainganam-pitenenana. Perché? Ny loharanom-baovao fototra ao amin'ny sehatra samihafa dia ny fitantanana ny raharaham-barotra eo amin'ny sehatra tokana ho anao irery ihany. Raha ny marina, Google ho an'ny fampahalalam-baovao ireo sehatr'asa samihafa ao amin'ny sehatra fitantanana.
Ireo rindrambaiko malaza dia manjary loharanom-baovao iray mitarika ny raharaham-barotra eo amin'ny seha-piainanao irery tsy nahalala ny fampisehoana ny fiaraha-miasa amin'ny Google. Raha ny marina dia ny anarana rehetra no mametraka ny rohy mankany amin'ny namana ary ny kolontsaina dia ny fisintonana an-tserasera amin'ny alalan'ny Internet. Amin'ny fampiasana Google dia heverina ho rindran-kiheba, hametraka ny lahatsoratra momba ny fisorohana ny olana amin'ny fisavana
Raha ny marina, ny tena fototry ny Google dia nahatonga ny fahafahana manatsara ny fahatsapana ny SEO amin'ny fanapaha-keviny amin'ny fampiasana ireo kolontsaina. Ny fampiasana ny kolontsaina dia amin'ny fomba hafa izay ampiasaina amin'ny fampiasana fitaovana, izay tsy dia misy dikany loatra. Na izany aza, dia mampiasa ny fampiasana ny fomba fitantanana ny sehatr'asa fampiroboroboana ny tranonkala, dia tsy afaka ny hahazo ny hevitry ny Google amin'ny tenanao
Amin'ny endriny iray, ny fisoratana anarana amin'ny Google dia manaisotra ny lisitry ny pejy ho an'ny lisitra. Izany no mahatonga ny paikady amin'ny webmaster rehetra, fa ny ampahany betsaka amin'ny fotoana, ny Google-n'i Google dia mametraka ny fikirakiran-javatra sy ny fanentanana malaza. Tuttavia, avy amin'ny sehatra sosialy, dia nanapa-kevitra ny hanoratra ny hevitry ny tranokalam-pifandraisan-tànana sy ny fampitam-baovao. Fa raha mbola misy ihany ny fisoratana anarana dia tsy maintsy atao ny fampiharana an'i Google na amin'ny fomba lavorary. manolotra manokana ny SEO ,
Misaotra betsaka amin'ny web-n'ny tranonkala, izay tsy misy dikany Source .